1 Samuweli 22 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
22 Ngoko uDavide wahamba apho+ waza wabalekela+ emqolombeni+ waseAdulam;+ yaye beva abantakwabo nendlu kayise iphela baza behla baya kuye apho. 2 Nawo onke amadoda asekubandezelekeni+ nawo onke amadoda awayenamatyala+ nawo onke amadoda amphefumlo ukrakra+ aqokelelana ndawonye kuye,+ waza waba yintloko phezu kwawo;+ kwabakho ke kuye amadoda amalunga namakhulu amane. 3 Kamva uDavide wemka apho waya eMizpe kwaMowabhi waza wathi kukumkani wakwaMowabhi:+ “Ndincede, makhe ubawo noma+ bahlale nani ndide ndazi oko uThixo aya kukwenza kum.” 4 Ngako oko wabahlalisa phambi kokumkani wakwaMowabhi, baza baqhubeka behlala naye yonke loo mihla uDavide wayekwindawo engafikelelekiyo.+ 5 Ekuhambeni kwexesha uGadi+ umprofeti wathi kuDavide: “Umele ungaqhubeki uhleli kule ndawo ingafikelelekiyo. Mka, uze ke ungene kwilizwe lakwaYuda.”+ Ngenxa yoko uDavide wemka waza wangena kwihlathi laseHereti. 6 Weva uSawule ukuba ufunyenwe uDavide namadoda awayenaye, ngoxa uSawule wayehleli eGibheya phantsi komthi wetamariske+ kwindawo ephakamileyo nomkhonto wakhe+ usesandleni sakhe nabo bonke abakhonzi bakhe bemi ngakuye. 7 Wandula ke uSawule wathi kubakhonzi bakhe ababemi ngakuye: “Khanincede, niphulaphule, nina maBhenjamin. Ngaba unyana kaYese+ uya kuninika nonke amasimi nezidiliya na?+ Ngaba nonke uya kunimisela nibe ziintloko zamawaka+ neentloko zamakhulu? 8 Kuba nina, nonke, nindenzele iyelenqe; akukho namnye ukutyhilayo oko endlebeni yam+ xa unyana wam esenza umnqophiso+ nonyana kaYese, yaye akukho namnye kuni onovelwano ngam aze ayityhilele indlebe yam ukuba unyana wam undivusele umkhonzi wam ukuba andilalele ngokwendlela ekungayo ngale mini.” 9 Waphendula ke uDowegi+ umEdom, ekubeni wayemiswe phezu kwabakhonzi bakaSawule, waza wathi: “Ndambona unyana kaYese efika eNobhi kuAhimeleki+ unyana ka-Ahitubhi.+ 10 Waza yena wambuzela+ kuYehova; wamnika nomphako,+ wamnika nekrele+ likaGoliyati umFilisti.” 11 Wathumela kwaoko ukumkani ukuba kubizwe uAhimeleki unyana ka-Ahitubhi umbingeleli nayo yonke indlu kayise, ababingeleli ababeseNobhi.+ Ngoko bonke beza kukumkani. 12 Ke kaloku uSawule wathi: “Khawuncede, uphulaphule, wena nyana ka-Ahitubhi!” nomnye ke wathi: “Ndim lo, nkosi yam.” 13 Waza uSawule wahlabela mgama wathi kuye: “Kutheni na ukuze nindenzele iyelenqe,+ wena nonyana kaYese, ngokumnika kwakho isonka nekrele, nokuba umbuzele kuThixo, ukuze andivukele njengomlaleli ngokwendlela ekungayo ngale mini?”+ 14 UAhimeleki wamphendula ukumkani waza wathi: “Ngubani na phakathi kwabakhonzi bakho bonke onjengoDavide,+ othembekileyo,+ nongumkhwenyana+ kakumkani nentloko yamafanankosi akho nobekekileyo endlwini yakho?+ 15 Ndiyaqala na namhlanje ukuba ndimbuzele+ kuThixo? Makube lee oko kum! Ukumkani makangabeki nto nxamnye nomkhonzi wakhe nanxamnye nendlu kabawo iphela, kuba kuko konke oku umkhonzi wakho ebengazi nto encinane okanye enkulu.”+ 16 Kodwa ukumkani wathi: “Ngokuqinisekileyo uya kufa,+ Ahimeleki, wena nayo yonke indlu kayihlo.”+ 17 Waza ukumkani wathi kwiimbaleki+ zakhe ezazimi ngakuye: “Jikani nize nibabulale ababingeleli bakaYehova, ngenxa yokuba nesabo isandla sinoDavide nangenxa yokuba babesazi ukuba ungobalekayo baza abayityhilela indlebe yam!”+ Abakhonzi ke bakakumkani abazange bafune ukolula isandla sabo ukuze bahlasele ababingeleli bakaYehova.+ 18 Ekugqibeleni ukumkani wathi kuDowegi:+ “Jika wena uze uhlasele aba bingeleli!” Ngoko nangoko uDowegi umEdom+ wajika waza wabahlasela ngokwakhe ababingeleli wabulala+ ngaloo mini amadoda angamashumi asibhozo anesihlanu athwala iefodi+ yelinen. 19 KwaneNobhi+ isixeko sababingeleli wasixabela ngohlangothi lwekrele, indoda kwakunye nomfazi, umntwana kwakunye nowanyayo nenkunzi yenkomo ne-esile nemvu ngohlangothi lwekrele. 20 Noko ke, unyana omnye ka-Ahimeleki unyana ka-Ahitubhi, ogama linguAbhiyatare,+ wasinda waza wabaleka wemka walandela uDavide. 21 Wandula ke uAbhiyatare wamxelela uDavide oku: “USawule ubabulele ababingeleli bakaYehova.” 22 Wathi ke uDavide kuAbhiyatare: “Bendisazi kakuhle loo mini ukuba,+ ngenxa yokuba uDowegi umEdom wayelapho, nakanjani na uya kumxelela uSawule.+ Ndiwenzele ububi ngokobuqu wonke umphefumlo wendlu kayihlo. 23 Hlala nam. Musa ukoyika, kuba nabani na ofuna umphefumlo wam ufuna umphefumlo wakho, ungulowo ufuna ukukhuselwa unam nje.”+